Ugu dambeyn dhimashada Wariye Jamal Khashoggi waa la xaqiijiyay – XOGMAAL.COM
Ugu dambeyn dhimashada Wariye Jamal Khashoggi waa la xaqiijiyay
Waxaa xilkii la qaaday ku-xigeenka sirddoonka Axmed Al-Caasiri iyo la taliyaha arrimaha sharciga boqortooyada Sacuud Al Qaxdhaani kadib markii ay iska fogeeyeen in ay wax lug ah ku leeyihiin falka lagu dilay saxafiga Jamaal.
By Soomaaliya	 On Oct 20, 2018
Dowladda boqortooyada Sucuudiga ayaa xaqiijisay geerida saxafigii u dhashay dalkaasi ee la baadigoobayay, ka dib war ka soobaxay Xukuumadda Riyadh ayaa lagu sheegay in uu geeriyooday Wariye Jamal Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashey Sucuudiga,kaasi oo maalmahan la baadi goobayay kadib markii la wayaay.
Wakaaladda wararka ee sucuudiga ayaa sheegtay in Jamaal Khaashuqji uu geeriyooday ka dib markii ay dagaalameen isaga iyo dad ku sugnaa gudaha qunsuliyedda Istanbul, dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay muran iyo dhex maray saxafiga iyo dadka dilay.
Dhinaca kale xeer-ilaaliyaha guud ee Dalka Sucuudiga ayaa war uu soo saaray ku sheegay in baaritaan dheeraad ah kadib la ogaaday in suxufigaasi uu ku dhintay Qunsuliyadda.
Sucuudiga ayaa sheegay in 18 qof loo xidhay arrintan isla markaana xilkii laga qaaday taliye ku xigeenkii sirdoonka iyo la taliyaha gaarka ah ee dhaxal sugaha sucuudiga.
Donald Jey Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa cadeeyey in aan la aqbali Karin arrintaasi,Mr Trump ayaa sidoo kale xusay in Sucuudiga uu yahay saabiib dhow,hase ahaatee la isla xisaabtamayo.
Hoggaamiyaasha Turkiga iyo Sucuudiga ayaa khadka telfoonak ku wada hadlay,ayna kawada hadleen sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa laamaha sirdoonka Sucuudiga.
Weerar ka dhacay Kuleej ku yaalla Crimea oo ay dad ku dhinteen
Madaxtooyada Puntland ee Garoowe oo qal qal gashay